Jiri Osi Efere Efere Kabeeji - Ezi Ntụziaka
b ricotta chiiz na obi chiiz otu
mee mịlịlị na-enweghị blender
macaroni na cheese Sanwichi esi nri
Jiri Osi Efere Efere Kabeeji
(Ihe ndị a abụghị ndụmọdụ ahụike, ọ bụ maka ebumnuche naanị. Biko kpọtụrụ dọkịta gị tupu ịmalite mmemme mmemme ọ bụla.)
Ofe Kabeeji bụ otu n’ime usoro nri kachasị amasị anyị n’afọ niile!
Ọ dị egwu, dị mma ma na-atọkwa ụtọ. Ntụziaka ofe kabeeji a dị mfe nwere ọtụtụ akwụkwọ nri ọhụrụ na n'ezie kabeeji niile na-atọ ụtọ na broth na-atọ ụtọ!
Naanị minit ole na ole ịkwadebe, onye na-esiri gị nri ngwa ngwa na-arụ ọrụ niile na-eme ka nri a bụrụ nri ga-atọ gị ụtọ izu niile!
Kabeeji dị ka ọ bụ mgbakwunye zuru oke na ofe sitere na ọgaranya na tomatoey (dịka Ntụziaka ofe Kabeeji ) to velvety Creamy soseji & ofeji .
M na-eme otu ogbe nke Obu Loss akwukwo nri akwukwo nri ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu ọ bụla.
Ọ na-atọ m ụtọ maka nri ehihie ma mgbe ụfọdụ enwere m obere efere n'ehihie dị ka nri ma ọ bụ tupu nri abalị jupụta m na ihe dị mma!
Juputara na akwukwo nri
Achọpụtara m na m na-eri ọmarịcha ofe ofe tupu m rie nri ọ bụghị naanị na-enyere m aka ị nweta nri ndị ọzọ na nri m, kamakwa ịdebe calorie m maka nri ndị ọzọ.
Kabeeji bụ otu n'ime akwụkwọ nri kachasị amasị m!
Ntụziaka ofe kabeeji a dị mfe na-ewe naanị nkeji oge iji jikọta ọnụ wee kwe ka ite ite gị rụọ ọrụ niile!
Kedu ka ị si eme ofe kabeeji na ite ite?
Dị mfe dị ka nke m mbụ kabeeji ofe uzommeputa bụ, Ajuola m ọtụtụ oge esi esi ofe kabeeji akụ ite.
Achọrọ m uzommeputa nke na-enweghị ike ịmịnye ya n'ọkụ na-adịghị ngwa ngwa, mana nke ahụ ga-enwekwa isi nke ga-enyere ya aka n'ọtụtụ mgbakwunye.
Isi isi ofe a zuru oke iji rie ya ma ọ bụ tinye ọkacha mmasị gị dabere protein (dika ọkụkọ) na carbohydrates dị mma (dị ka osikapa osikapa) iji mepụta ofe ọhụrụ iji nwee ọ allụ n’izu niile.
Enwere ike ịhazi ya n'ụzọ masịrị gị ma ọ bụ jiri akwụkwọ nri ọ bụla ị nwere n'aka.
pan e ghere eghe brussel na-epulite na poteto
Kedu ihe na-aga na ofe kabeeji?
E nwere ọtụtụ kabeeji ofe Ezi ntụziaka na ọtụtụ nsụgharị nke kabeeji ofe nri uzommeputa. Ha nile nwere ngwakọta nke inine na mgbe ụfọdụ ihe ọ vegetableụ vegetableụ akwukwo nri ma ọ bụ ọbụna ngwakọta ofe ofe.
Ọ masịrị m iji ngwakọta nke ihe ndị nwere obere sodium na obere shuga iji mepụta nsụgharị ahụike, mee ka ọ bụrụ ndị na-ahụ maka Ibu ibu (ihe efu efu) ma debe calorie n'okpuru calorie 50 kwa iko.
Ezie na inwere ike iji ngwakọta ọkacha mmasị gị, enwere ihe ole na ole dị mkpa ị ga-eji mee ofe a ngwa ngwa esi nri ofe kabeeji, akwụkwọ nri, broth na seasonings / spices.
N'ezie ị ga-achọ kabeeji ọhụrụ iji bido (ị nwere ike ịchọta ozi gbasara ị na-ahọrọ ụdị iche kabeeji ebe a ).
Maka uzommeputa a, m na-eji akwụkwọ nri ọhụrụ saa, sliced ​​wee gbakwunye ya na onye na-esi nri ngwa ngwa (ọ dịghị mkpa iji sie nri).
Achọpụtara akwụkwọ nri a gbakwunyere na ofe kabeeji maka ike iguzo na onye na-eji nwayọ nwayọ nwayọ na-enweghị mushy tinyere ha niile na-anụ ọkụ nke ọma.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbakwunye na akwụkwọ nri (ma ọ bụ dị iche iche), gbaa mbọ hụ na ị ga-ebu oge isi nri / nri ọkụ.
Dị ka ihe atụ zucchini na broccoli ma na-esi nri ngwa ngwa ma tinye ya na awa ikpeazụ nke isi nri ka ha ghara inwe mushy.
Efere ọkụkọ na-amasị m (ma ọ bụ arụrụ n'ụlọ ọkụkọ ọ bụrụ na enwere ike) mana ọ bụrụ n’ịchọrọ idobe onye anaghị eri anụ a, broth akwukwo nri ga-arụkwa ọrụ.
Iji broth sodium dị ala na obere tomato mkpọ mkpọ ga-enyere aka idobe nnu nnu maka usoro nhazi a.
Ogwu Ogwu O Na-aga nke oma
Ofe a na-eji ihe na-esi ísì ụtọ dịka yabasị na galik mee ka ofe sie. A bit nke tomato mado na-agbakwunye ụfọdụ richness na n'ikpeazụ m tinye Italian sizinin.
Enwere ike ịchọta oge nri Italian na ose na ọ bụ ngwakọta nke basil, oregano, rosemary na ole na ole na ngwa nri.
Ọ bụ ihe dịgasị iche ma na-agbakwunye ụtọ dị ukwuu na ofe a. Enwere ike ịgbakwunye ọkacha mmasị gị dịka Arụrụ n'ụlọ Taco sizinin ma ọ bụ ole na ole kụrie nke na-ekpo ọkụ ihendori.
N'ikpeazụ, tupu ị na-eje ozi, anyị na-agbakwunye ahịhịa ọhụrụ gụnyere pasili na basil. A na-agbakwunye akwụkwọ nri ọhụrụ na njedebe isi nri ka nke a na-eme ka ekpomeekpo ahụ dị ọhụrụ.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji sie ofe kabeeji?
Anyị na-esi nri a na ngwụsị izu wee rie ya n’ime izu niile maka nri abalị na nri ehihie.
ole ọka ehi nwere maka mmadụ
Ofe ofe kabeeji a dị mfe iji dozie ma ngwa ngwa ngwa na-arụ ọrụ niile.
N’ime ite, ofe kabeji a were ihe dị ka elekere asatọ dị obere ma ọ bụ jiri awa 4-5 dị elu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nke a ntakịrị ntakịrị ị nwere ike sie ya na stovu ihe dị ka nkeji 25 ma ọ bụ ruo mgbe inine niile dị nro.
Iji mee ka ọ bụrụ oyi, ana m ekewa ya na nri onye ọ bụla n'ime akpa friza.
Iji mee ka mmiri juo m oyi, m na-etinye akpa n’ime ngwa nju oyi n’abalị ahụ ma n’ehihie n’echi ya ọ dịla njikere ijikere naanị n’ime nkeji ole na ole.
Ihe kachasị mma na ofe a bụ na ọ na-atọ ụtọ dị ka isi iji mepụta nri izu niile.
Mgbe anyị na anụrị ụtọ ya dịka ofe akwukwo nri zuru oke mana anyị na-agbakwunye na ọkacha mmasị anyị iji mepụta ofe ọhụrụ maka nri n'ime izu.
Mgbakwunye aka CABBAGE SOUP
Gbakwunye protein na ụfọdụ ezigbo carbohydrates nwere ike ịgbanwe usoro a ka ọ bụrụ ihe ụtọ ụtọ ọhụrụ na-atọ ụtọ iji nwee ọ weekụ n'ogologo izu niile!
Akwụkwọ nri na oge a dị n’ime ofe a bụ ihe dị iche iche, ọ ga-ejikọ ọtụtụ nke ọma.
Turkey Noodle Ofe Gbakwunye noodles niile esiri esi na ara shki ma ọ bụ ara ọkụkọ
Ofe Osikapa : Isi nri ọkụkọ (ma ọ bụ ara ọkụkọ) na osikapa ma ọ bụ osikapa ọhịa.
Quinoa Akwukwo nri ofe Parmesan cheese: Esie nri quinoa na ifesa nke parmesan cheese.
Ofe Bean Italian : Agwa mịrị cannellini agwa (ọcha akụrụ agwa), ọhụrụ basil na-akụtu nke parmesan cheese.
Skinny Beef Akwukwo nri ofe : Esie nri extra dabere ala beef na diced ụtọ nduku.
Ofe Erimeri : Salmọn, oporo & pasili. (Tinye n'ime ofe raw na esi nri 7-10 nkeji).
Minestrone akwukwo nri : Akụrụ agwa, dum wheat macaroni noodles, basil ọhụrụ.
Ohere iji mepụta ekpomeekpo ọhụrụ na uzommeputa a enweghị njedebe! Mee ka anyị mata ihe mgbakwunye gị kachasị mma!
4.91site nairi abụọ na otuvotu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nri5 awa Oge zuru ezu5 awa iri na ise Nkeji Ọrụ14 iko Onye edemedeHolly Nilsson Ofe Kabeeji bụ otu n’ime usoro nri kachasị amasị anyị n’afọ niile! Ọ dị egwu, dị mma ma na-atọkwa ụtọ. Bipute Ntụtụ
▢1 obere yabasị okpokoro
▢1 iko karọt okpokoro
▢4 iko kabeji chopped (approx. ¼ isi nke kabeeji)
▢abụọ celery stalks gbanwere
▢1 iko agwa griin gbanye na 1 anụ ọhịa iberibe
▢abụọ dum mgbịrịgba na-ede ede gbanwere
▢28 ounce obere sodium diced tomato
▢6 iko obere akwukwo nri sodium ma ọ bụ ọkụkọ efere
▢abụọ tablespoons mado tomato
▢1 ½ ngaji Oge Italian
▢1 ngaji pasili
▢1 ngaji basil
▢abụọ iko akwụkwọ nri ọhụrụ coarsely chopped
Gwakọta akwụkwọ nri niile na nnukwu ite ite.
Add tomato mkpọ, broth, mado tomato, akwukwo mmiri, akwukwo nri nke Italy, ose ma bido ichikota.
Kpuchie ma sie nri dị elu ruo awa 5 ma ọ bụ gbadaa maka awa asatọ.
Ozugbo esiri ya, tinye pasili, basil na inine ma sie nri karie nkeji ise.
Calorisị:41,Carbohydrates:7g,Protein:3g,Abụba:1g,Abụba Ajuju:1g,Sodium:70mg,Potassium:Ogbe 283mg,Eriri:abụọg,Sugar:3g,Vitamin A:Ogbe 2631IU,Vitamin C:3. 4mg,Calcium:33mg,Iron:1mg
Isiokwuofe kabeeji, ofe ofe, nri, ahụike, na-adị njọ N'ezieOfe Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Kabeeji na ọnwụ Loss
(Ihe ndị a abụghị ndụmọdụ ahụike, ọ bụ maka ebumnuche naanị. Biko gwa dọkịta gị tupu ịmalite mmemme mmemme ọ bụla)
Ofe Kabeeji Dị Mma Maka Abụba Na-ere Ọkụ?
Ofe a zuru oke na ya onwe ya nwere obi ụtọ dịka ofe akwukwo nri. Ọ bụ ihe dị ala na calorie na abụba na nnukwu eriri.
Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-echekarị kabeeji dịka abụba na-ere ọkụ nri, ọ dịghị nri nwere ike n'ezie ọkụ abụba.
Anyị niile anụla maka nri ofe kabeeji nke, dị ka WebMD , bụ usoro ịdị arọ oge dị mkpirikpi nke ga - enyere gị aka idalata 10 pound na ụbọchị 7 .
Kedụ ihe ị ga - eri na ofe ofe?
Ihu ọma, maka 7 ụbọchị ị na-eri a version nke, ị chere ya, kabeeji ofe. Yana ofe, ihe kabeeji ofe nri nri atụmatụ na-agụnye obere akụkụ nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na-edozi ahụ, osikapa, anụ (ọkụkọ, azụ, ma ọ bụ beef), poteto, ihe ọ juiceụ fruitụ mkpụrụ osisi, na mmiri ara ehi .
Dị ka ọtụtụ n'ime anyị maara, dị ka HọrọMyPlate.gov , nri dị mma gụnyere ọtụtụ mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, protein, mmiri ara ehi na ọka siri ike!
Kabeeji bụ akwukwo nri ma ọ dị mma maka gị, na-ebuju vitamin, obere kalori (na ụtọ).
Anyị na-agbakwunye kabeeji na ofe, okpokoro na akpuru . Enwere ike tinye ya n'ime ọtụtụ mmemme ọnwụ ma ọ bụ na-eri nri ahụike mgbe niile!